Maqal:Maxay tahay ujeedada wafdiga heerka wasiir ee booqanaya degmada Eyl ?(Cod) – SBC
Maqal:Maxay tahay ujeedada wafdiga heerka wasiir ee booqanaya degmada Eyl ?(Cod)
Wafdi heer wasiir ah oo ka socda Puntland ayaa booqasho ku maraya degmada Eyl iyo deegaano kale oo ku yaal xeebaha gobolka Nugaal, iyadoo wafdigaasi ay ka mid yihiin xubno ka socda Qaramada Midoobay gaar ahaan qaybta la dagaalanka burcad badeeda iyo daroogada.
Wafdigan waxaa horkacaya wasiirka Dekadaha Gaadiidka Bada iyo ladagaalnka Burcad Badeeda Puntland Siciid Maxamad Raage , waxay kulamo ku aadan u kuurgaliada xaalada amaanka gaar ahaan burcad badeeda, la kulanka maamulada iyo duqeyda dhaqanka deeganadaasi ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada.
Warar SBC ay ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale sheegaya in wafdigan ay ku hawlan yihiin sidii loo siideyn lahaa markab u raran ganacsato u dhalatey deegaanada Somaliland oo lagu haysto xeebaha Puntland, markabkaasi oo ku sii jeeday dekada magaalada Barbara lagana qabsadey xeebaha badda cas.
Hadaba arimahaasi iyo arimo kale oo fara badan ayaan ka wareysanahay wasiirka Dekadaha Gaadiidka Bada iyo ladagaalnka Burcad Badeeda Puntland Siciid Maxamad Raage.
Link-ga audio -ha hoose ka dhageyso wareysiga wasiirka.HALKAN RIIX